Shan sano kaddib Kooxda Mogadishu city club oo soo gabagabeysay taariikh xumadii ka haysatay Dekedda – Gool FM
Shan sano kaddib Kooxda Mogadishu city club oo soo gabagabeysay taariikh xumadii ka haysatay Dekedda
Haaruun February 6, 2020
(Muqdisho) 06 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Mogadishu City Club ayaa xasuuq wayn oo 5-0 u geysatay naadiga Dekedda ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Somali Premier League.
Difaacdayaasha horyaalka Somali Premier League ee Dekedda ayaa shalay waxay u ahayd maalin aad ugu xun, maadaama loogu badiyay 5-0, xitaa waxa ay awoodi waysay inay dhaliso goolka calanka.
Wiilasha Mogadishu City Club ayaa soo gabagabeeyey taariikh xumadii ka haysatay Kooxda Dekedda oo ay ahayd in aysan guul kaga gaaran horyaalka Somali Premier League.
Kooxda Mogadishu City Club ayaa ugu dambeysay iney guul ka gaarto naadiga Dekedda sanadkkii 2015-kii taasoo ka dhigan in muddo shan sano ah aysan awood u yeelan inay horyaalka kaga adkaadan Dekedda, balse maalintii shalay ayey taariikh xumadaas soo afjareen.
Xiddigaha Mogadishu City Club ayaa wajiyadooda laga dheehanayay farax aad u wayn iyo dabaal dag cajiib ah, iyadoo gacmahooda ku tilmaamayey shantii gool ee ay ku adkaadeen, halka kuwa qaar ay madax gacanta ay saarteen kuwaas oo rumeysan waayay natiijada ciyaarta.
Naadiga Mogadishu City Club ayaa muddo dheer kaddib waxay qabteen hoggaanka horyaalka Somali Premier League qaab farqiga goolasha ah, balse waxay baaqi ku sii ahaan doonan ilaa kulanka galabta dhaxmari doona kooxaha Horseed iyo Elman, maadama labadan kooxood ay leeyihiin 12-dhibcood oo Horseed ah & Elman oo leh 14-dhibcood, labadooda midkii badiya ayaa hoggaanka horyaalka qaban doona, haddii ay barbaro ku kala baxaanna Elman ayaa hal dhibic oo qura ku qabanaysa hoggaanka.
Tababaraha hoggaamiya Kooxda Mogadishu City Club ee Mohamed Mistir Lamjed ayaa diiwan gashtay taariikh wanaagsan, maadaama labadii kulan ugu horreysay uu ka hor yimaado kooxda Dekedda tartammada oo dhan uu ka adkaaday, sidoo kale waxa uu qabtay shaqo muddo dheer uu qaban waayey Hussien Mblango oo aheyd inuu guul ka gaaro kooxda Dekedda, isago ka hor yimid kulamo aad u badan tartammada kala duwan.
Kooxda Dekedda waxa ay noqotay naadiga labaad ee sanadka goolasha ugu badan hal kulan laga dhaliyo marka laga tago Kooxda Rajo oo 6 gool laga dhaliyey horyaalka Somali Premier League.
Qaar ka mid ah dhallinyarada Magaalada Muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka galabta ee Horseed iyo Elman
Manchester United iyo Chelsea oo ku tartamaya saxiixa xiddig ay Kooxdiisu ku qiimeynayso 100 milyan oo gini